LinkedIn Waxay Bilaabeysaa Websaydh Linkedin Demographics | Martech Zone
LinkedIn Wuxuu Bilaabayaa Websaydh Dadweynaha Dadweynaha ee Linkedin
Khamiis, Juun 27, 2017 Arbaco, Juun 26, 2017 Douglas Karr
LinkedIn waxay jabineysaa muuqaal cusub usbuucyada soo socda, Websaytka Dadweynaha ee LinkedIn. Websaydhka Demographics wuxuu adeegsadaa xogta LinkedIn's 500 + milyan xubnood si ay u siiso aragti ku saabsan booqdayaasha websaydhka shirkaddaada qaab ixtiraamaya asturnaanta xubinta.
Ku soo bandhigida interface fudud oo la akhriyi karo oo ku jira Maareeyaha Ololaha LinkedIn, Websaydhka Demographics wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku shaandheyso websaydhkaaga dhagaystayaasha 8 cabbir shaqsiyadeed, oo ay ku jiraan:
Kala sareynta shaqada
Tirakoobka Websaydhka ayaa kuu oggolaan doona inaad ku kala shaandhayso taariikhda kala duwan si aad u fahamto in ololihii suuqgeynta ee dhowaa uu sare u qaaday taraafikada qaybaha aad rabto ee dhagaystayaasha. Waxaa intaa dheer, hadda waad arki kartaa haddii aad ku soo jiidatay barkado cusub oo rajo ah boggaaga. Aragtiyadan, waxaad ku farsameysan kartaa waxyaabaha cusub ee suuqgeynta loogu talagalay inay si fiican ula jaan qaadaan dhagaystayaashaas.
Tusaale ahaan, aan dhahno waxaad u socotaa suuq-geyn ganacsi IT ah oo aad caado ahaan u bartilmaameedsaneysaa maamulayaasha tikniyoolajiyadda Mareykanka. Markaad fiirineyso websaydhkaaga Shaashadda Dadweynaha, waxaad ogaaneysaa in maamulayaasha daryeelka caafimaadka ee ku saleysan EMEA ay booqanayaan bogga wax soo saarka in ka badan intaad moodeysay. Ku qalabaysi aqoontaan, waad hagaajin kartaa istaraatiijiyadaada suuqgeynta si aad u beegsato dhagaystayaasha dhowaan la helay.
Websaydhyada Dadweynaha waxay na siinayaan xoogaa aragtiyo waxtar leh oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee degelladayada caalamiga ah. Waxay naga caawineysaa inaan si cad u fahamno haddii aan ku gareyno dhagaystayaasha saxda ah istiraatiijiyadeena suuq-geynta websaydhka iyo sidoo kale bixinta caddayn ku saabsan dhagaystayaasha shabakadeena inta lagu jiro dhammaan nolosha macaamiisha. Bhanu Chawla, Madaxa Istaraatiijiyada Dijital ah, Cornerstone OnDemand
LinkedIn Website Demographics waa horumar weyn oo horay u qaadis ah oo kaa caawinaya inaad sameysid go'aanno suuq-geyn ah oo xog-ogaal ah si aad u kobciso ganacsigaaga. Awoodda aad ku ururin karto fikradaha ka hor, inta lagu jiro ama ka dib ololeyaasha, waxaad hagaajin kartaa istiraatiijiyaddaada oo waxaad sameyn kartaa go'aamo caqli badan oo suuqgeyn ah.
Tags: Analyticsshirkaddacabirka shirkaddadalkagaraafyadawarshadahashaqada shaqadakala sareynta shaqadacinwaanka shaqadaLinkedInisku xidhka degellada ku xidhangoobtafalanqaynta boggatirakoobka bogga
Cision waxay kudareysaa Qiyaasta Isgaarsiinta Saameynta Saameynta Suuqgeynta
Maxay yihiin Fariimaha ugu Fiican Emailka? Maxay Tahay Email Fonts Ammaan ah?
Jul 31, 2017 markay tahay 1:52 PM
Hi Douglas Karr, Aad baad ugu mahadsantahay qoraalka aad ka qortay Linkedin Website Demographics. Wax badan ayey naga caawin doontaa suuqgeynta websaydhka.